1. Misy ihany koa ny tsindrin-tsakafo matsiro izay mora atao, ary izy ireo no menus ambony manerantany amin'ny vanim-potoana rehetra. Satria misy fofona manintona Tsiro malefaka sy malefaka Fifaninanana misy karazana lovia hafa Handravaka tsara araka ny tsironao na izay anananao ao an-trano tanteraka. Ary dia menio azon'ny ankizy atao Manampia fahafinaretana sy zava-matsiro amin'ny fialantsasatra na amin'ny andro misy hetsika tsotra. Fa mahatsapa manokana Ary ny fomba fanaovana pancakes Na dia menio tsotra aza Fa omeo fahatsiarovana isaky ny refy izay tena manohina tokoa
2. Fantaro ny pancake menio malaza, ny Pancake (Pancake) dia heverina ho karazana mofomamy na mofo fisaka. Mampiasanao akora vita amin'ny lafarinina afangaro amin'ny ronono, dibera, atody, siramamy na iza na iza mihodina nefa maniry Amin'ny fitondrana ny lafarinina endasina amin'ny menaka na dibera mandra-pahamasaka Noho izany dia mifamatotra ny teny Pan Ny niandohan'ny anarana tsindrin-tsakafo, pancakes nohanina mafana Toy ny sakafo maraina Na handravaka amin'ny syrup Tantely sy voankazo Ary koa sôkôla Izy io dia azo atao amin'ny fomba tiantsika sy ny ankohonantsika.
3. Ireo akora fanaovana pancake dia fantatra amin'ny maha mpiorina azy fa saika ny lakozia rehetra ao aminy dia tsy misy fividianana fanampiny. • lafarinina vita amin'ny varimbazaha • siramamy • sira • vovo-mofo • atody
4. Ahoana ny fomba fanaovana pancakes Sakafo mahafinaritra sy matsiro • Araraka ao anaty vilia ny lafarinina varimbazaha, siramamy, sira, vovo-mofo ary aroharo daholo ny akora rehetra. Afangaro miaraka ny zava-drehetra mandra-pahatongan'ny homogen. • Rehefa vita ny fikororohana. Atsonika anaty rano ny dibera. Atokana mba hanafana, ampio dibera ary afangaro mandra-pahatongan'ny homogène. Manokana fotoana kely. • Aforaho amin'ny lapoaly afangaro ny lapoaly. Mandra-pahatongan'ny hafanana ny lapoaly • Rehefa manomboka mafana ny lapoaly amin'ny Manampia dibera kely.
5. • Ho an'ny hatsaran-tarehy fanaovana pancakes, safidio lapoaly fisaka • Avy eo dia andraso ny hitsonika tanteraka ny dibera • Atombohy araraka ny vilany pancake amin'ny lapoaly. Ny endrika malaza dia boribory. Ampidiro izay tianao Na izay manana pinta dia afaka apetaho amin'izany ny lapoely ary ampio ny lapoaly pancake • Atsipazo manodidina ny pancake. Mandra-pahatonga ny pancakes ho volontsôkôlà, tsara tarehy. • Alamino ny lovia amin'ny alàlan'ny fametahana miaraka amin'ireo voankazo mamy sy marikivy, ampio fanosotra nokapohina, aondraho ranomandry, arotsaho tantely, vonona hanompo !!
6. Amin'ny toetr'andro mangatsiatsiaka dia manaova pancakes matsiro sy matsiro ary atsofohy amin'ny dite, kafe na kakao mafana. Manampy amin'ny famoronana atmosfera tsotra Ho mafana sy tsara tarehy Miampy menio izay azon'ny ankizy manosotra araka izay itiavany azy Ary koa ny fanaingoana takelaka toy ny zavakanto tsy misy fetra Mangatsiaka izany Andao ampiana hafanana amin'ny fomba tsotra hanaovana pancake hamoronana fahasambarana ho an'ny fianakavianao !!!